Annapolis Arts, Crafts and Festival 2016
Nyika dzakabatana Maryland Annapolis
Imhemberero yeAnapolapolis, Crafts uye Wine ndeyekupemberera kwemazuva maviri emagariro muAnnapolis, Maryland ine mabasa emitemo yevanopfuura 200 vaongorori vhizha nemhizha, vhidhiyo yewaini, zvokudya, mararamiro anorarama uye mabasa evanhu vemhuri yose. Mutambo uyu ucharatidza basa rakakosha yevashandi vanoshandisa mhando dzakasiyana-siyana-mifananidzo, zvigadzirwa, micheka, zvinyorwa, zvishongo, zvishongo uye unyanzvi hunoputika, huni, ganda, girazi nemifananidzo.
Unakidzwe newaini tastings kubva kunopfuura 15 Maryland wineries apo unotenga zvigadzirwa nemishonga - uchitenga waini negirazi kana bhodhoro pasi pewaini itsva neYainaka Chakudya Pavilion.
Annapolis inzvimbo yakanaka yepamhenderekedzo yezvakaitika kare iri pedyo neChesapeake Bay. Guta racho rinowedzera zvivako zvezana remakore rechi18 kune dzimwe nzvimbo dziri muUnited States, kusanganisira dzimba dzevane vese veMadlands vanoita seDeclaration of Independence. Iyi inzvimbo inofadza yekuongorora, nezvizhinji zvemasitamende makuru, mabhizimisi uye mitsuwa. Kuti uwane mamwe mashoko, ona Vakashanyira Vanotungamirira kuAnnapolis
Dates uye Nguva
Kuti usvike kuNavy-Marine Corps Stadium, siya Rt. 50 paKubva 24, Rowe Blvd uye utore rwechipiri paTaylor Ave. kusvika kuGedhi paGedhi 5. (Tevera zviratidzo kune imwe nzvimbo yekupaka) Ona mapu
$ 5 nemakore 12 kusvika ku18 uye vakwegura (65 uye kumusoro)
Vana vane gumi uye pasi vari ZVAUNHU
Kugovera Maryland Wineries
Far East Shore Winery
Fiore Winery uye Distillery
Chishanu yeCreek Winery
Layton's Chance Munda Wemizambiringa uye Winery
Perigeaux Minda yemizambiringa uye Winery
Romano Munda Wemizambiringa uye Winery
Running Hare Munda Wemizambiringa
Theatre Theatre yeAnapolapolis - Nharaunda itsva inofamba inobva kuTheatre Theatre yeAnapolapolis inotaura "Broadway Bound," rwiyo rwemimhanzi runosanganisira zvekare uye zvemazuva ano Broadway tunes, chokwadi chekuti tsoka dzako dzigone. Imbirai pamwe chete nevechidiki vemudiki vanogara vachikuimbirai nenziyo dzakadai se "Lullaby of Broadway" (42nd Street), "For Good" (Wicked), uye "Zuva Rino asi Nhasi" (Kutenga). CTA ichaita musi weMugovera.
The Stageworkz Performance Company - Mhinduro yemaminitsi makumi matatu nemakumi matatu ichaita kuti vateereri vaimbire nziyo nemitambo yakakodzera kumakore ose. Iyo kambani yakabva kune Stageworkz Theatre Arts Project muMillersville, Md., Nevashandi vari pakati pemakore 8 kusvika ku18. Vanowana ruzivo rwemhizha mumhando dzose dzekutamba, inzwi, mimhanzi yemitambo, uye nhoroondo yekuita. Vachaita musi weMugovera.
Bates Chikoro Chikoro Kuita uye Kuonekwa Kwavo Maonero Okupikisa Mupambani Vanokunda - Onai kukunda mapepa e "Annapolis: The Arts" makwikwi. Vakatongwa pamusana pekugadzira uye kutanga; unhu hwekugadzirwa kwehupenzi uye huwandu hwekugadzirisa hunoenderana nemusoro unoti "Annapolis: The Arts."
Mifananidzo yeClassical Arts - Zviratidzo zvekushongedza huna henna uye zvidhori zvinopenya zvichagoverwa kwemazera ose pamwe nenyaya nguva uye nziyo neChechi Crystalonneys. Pfungwa dzekusika mushure mebhizimisi ndiKristualene Karaiskakis, mutambi wemasangano akawanda akaberekerwa kuSouth Africa, akakurira muMelbourne, Australia, uye chiGiriki Cypriot. Kuburikidza nerwendo rwake rwepanyika, akashanduka kuva muhanzi ane rudo uye anonzwisisika. Zviratidzo, manzwiro, zviitiko, uyewo unyanzvi hwevanhu vemunharaunda yeAustralia vane simba guru pamabasa ake. Vachaita mazuva maviri.
Annapolis Krisimasi Mwenje Chikepe Paradhiso 2017
US Naval Academy Campus Photos - Annapolis, MD
Annapolis Craft Beer neMutambo Wemimhanzi 2016
Shandisa SeatGuru.com kuti Uvandudze Hwokufambisa Kwemhepo
Kwatinofanira Kutora Kubika Makirasi muToronto
Mapeji eGermany Mapi uye Mutungamiri Wekutungamirira
Kushanyira Plymouth Rock muMassachusetts
Fesitiki, Mariro, Zvishandiso uye Perum Museums muFrance
Chii chinonzi Seattle Freeze?
Kutenga Makitikiti Anobva kuThiketmaster
7 yePamende National Parks Kutarisa Muzhizha
Kudya paMaxwell Food Center, kuSingapore
Valentine Day Zviitiko muColumbus